Hello Nepal News » यस्ती युवती, जो विमानसँग बिहे गर्दैछिन् !
यस्ती युवती, जो विमानसँग बिहे गर्दैछिन् !
विमानसँग बिहे ? सुन्नासाथ अचम्म लागिहाल्छ । तर, यो साँचो खबर हो । जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा बस्ने ३० वर्षीया मिहेल कोबकेले औपचारिक रूपमै मार्च २०२० मा विमान ७३७–८०० सँग विवाह गर्ने निर्णय नै गरेकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार विवाह नेदरल्यान्डको आम्स्टर्डममा हुने तयारी छ । सन् २०१४ मा टेगल एयरर्पोटमा ती युवतनीले पहिलोपटक उक्त्त विमान देखेकी थिइन् । यो बताइन्छ कि, उनी त्यसैबेलादेखि सो विमानसँग प्रेममा परेकी थिइन् । र, अहिले उनी सोही विमानसँग बिहे गर्दैछिन् ।
आखिर त्यो विमानमा त्यस्तो खास के छ ? जसका कारण एक सुन्दर युवती बिहे नै गर्न तयार भइन् । खबरअनुसार उनलाई विमानको पखेटा र थ्रस्टहरू मनपर्छ । उनका अनुसार, यो उनको लामो दूरीको प्रेम हो । उनी विमानलाई मायाले ‘सात्स’ भन्ने गर्छिन् । जर्मन भाषमा सात्स भनेको मनपर्ने मान्छे हो । र, उनी अहिले विमानसँग बिहे गर्ने तयारीमा छन् ।
त्यत्ति मात्रै हैन, विमानलाई हेर्न युवती जतिबेला पनि विमानस्थल पुग्छिन् । उनको विमान कालिगढ बन्ने सपना छ । विमानसँग आफूलाई टाढा राख्न डराउने उनले एक विमान खेलौना किनेकी छिन् । उनी खेलौनासँग नै सुत्छिन् र सधैं राख्ने गरेकी छन् ।
कोबकोले विमानसँग प्रेम गर्छिन्, जुन एकप्रकारको व्याकुलता हो । जसमा कुनै व्यक्ति निर्जिव वस्तुको साथ प्रेममा पर्दछ । यसलाई ‘अब्जेक्टोफिलिया’ भनिन्छ ।
त्यसो ती युवती सन् २०११ मा उनी एक व्यक्तिको प्रेममा थिइन् । तर उनी त्यो प्रेममा खुशी थिइनन् । उनी भन्छिन्, ‘सात्स नै मेरो पहिलो प्रेम हो । अरु विमानभन्दा सात्स फरक छ ।’
प्रकाशित मिति १८ माघ २०७६, शनिबार १४:५०